3 Fomba hanombohana tsy fivadihana raha mbola eo am-pianarana ianao
Ny fomba fiainan'ny mpianatry ny oniversite dia tsy mitovy amin'ny hafa - mihazakazaka avy any am-pianarana any am-pianarana alatsinainy ka hatramin'ny zoma ary mijery ny fahafaha-manao ho an'ny asa ho an'ny rehetra rehefa mifangaro amin'ny fahasalamana mahasalama. Na dia mety tsy ho toy ny laharam-pahamehana aza izany, ny fandraisana anjara amin'ny fandaharam-pandefasana sy valisoa amin'izao fotoana izao dia afaka manampy anao hahazo ny toerana tianao haleha amin'ny taona ho avy. Tsy mbola vao maraina loatra vao manomboka manapakevitra ny tsy fivadihana sy ny kilaometatra.
Ary mba ho mora kokoa izany, dia efa nanoritsoritra tantara maromaro izay mety ho hitanao ianao sy ny fomba ahafahanao mampiditra mora foana ny tsy fivadihana amin'ny fomba fanaonao isan'andro mba hanampy anao hamonjy anao amin'ny fotoana sy ny vola rahampitso.
Mahazo dingana isan'andro ianao
Mivoaha bebe kokoa amin'ny mofomamy ny kafe noho ny kafeinina fotsiny. Avy amin'ny fampiharana finday handrava karatra, ny fako kafe sy fivarotana eo an-toerana manerana izao tontolo izao dia fantatra amin'ny valisoa ho an'ireo mpikambana mahatoky. Starbucks, indrindra indrindra, dia fantatra amin'ny fandaharam-pandrosoana mahatalanjona. Ny tranonkala Starbucks Rewards vao haingana nohavaozina dia ahafahan'ny mpihinan'ny kafe mametraka kintana 2 ho an'ny dolara mandany ary mandray zavatra mahafinaritra taorian'ny fanangonana kintana 300. Ny mahatonga an'i Starbucks tena tsy manam-paharoa dia ny fampitàny ny kintany sy ny fifanakalozana amin'ny lozisialy hafa. Amin'ny Points.com, ny valisoa Ireo mpikambana dia afaka manara-maso ny kintany, manova azy ireo amin'ny kilaometatra sy ireo teboka hafa, ary na ny fanomezana na ny famindrana azy amin'ny namana.
Maro ny olona te hihaino izay lazainao.
Manana hevitra ve? Mahazo valisoa amin'izany! Ireo mpandeha dia afaka mampiakatra kilaometatra ho takalony amin'ny fizarana ny traikefany, ny fampitàna hevitra ary ny fanadihadiana. MileagePlus, Blue Blue sy Rapide Rewards, ohatra, dia afaka mandray anjara amin'ny United Opinion Miles Club, ny Air France-KLM Opinion Rewards Club sy ny valin'ny fitsidiham-bahiny Southwest.
Miles dia omena isaky ny fanadihadiana vita, ary ny maily rehetra nahazoanao dia mivantana mivantana ao amin'ny kaontinao. Ny fametrahana fanadihadihana amin'ny fototra tsy tapaka dia manakana ny kaontinao ho mahatoky ary ny fahavitan'ny lamandy.
Ny valim-panontaniana dia tsy ny hany fomba ahafahana mametraka teboka sy kilaometatra. Ny fandefasana voninkazo ho an'ny fitsingerenan'ny namanao na ny fanomezana ho an'ny Susan G. Komen ho an'ny Cure sy ireo fikambanana mpanao asa soa dia afaka manampy anao hanao ny andro iray ary hampitombo ny fifandanjanao.
Fiaramanidina, fiarandalamby ary fiara
Manomana seminera any ivelany, fitsangatsanganana amin'ny lohataona na farafahakeliny amin'ny faran'ny herinandro amin'ny herinandro, dia miara-miasa amin'ny fahombiazan'ny fidiram-bola. Ho an'ireo mpitsidika eran'izao tontolo izao, ny StudentUniverse - tolotra fitaterana fitsangantsanganana ho an'ny mpandeha an-tongotra - dia loharano lehibe. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasam-pitaterana sy fandraisam-bahiny manerana izao tontolo izao, dia manome hery ny mpianatra izy ireo mba hivezivezy mora kokoa raha tsy mandoa vola fanampiny. Raha ny tena izy, niara-niasa tamin'ny American Airlines sy United Airlines izy ireo hanolotra taham-pivarotana sy fanampiana fanampiny toy ny WiFi, entana entana sy famoaham-bola. Ny Amerikanina AAdvantage sy ny MileagePlus United MileagePlus dia afaka misokatra malalaka, ary afaka manomboka avy hatrany ianao.
Ireo fotoana rehetra mandritra ny fotoana lavitr'ezaka amin'ny alàlan'ny transatlantika na avy any ivelany dia fotoana ahafahanao manomboka manorina tsy fivadihana.
Saingy tsy voatery ho eny amin'ny rivotra ianao mba hahazoana kilaometatra tsy mivadika. Ho an'ny mpandeha an-tongotra, mijery fandaharam-bola fandaharam-pizaham-bary. Ny valisoa Speedway, ohatra, dia ahafahan'ireo mpanjifa mandray vola amin'ny fitsidihana tsirairay, manavotra azy ireo amin'ny fivarotana na ny fividianana amin'ny ho avy ary dia milalao lalao aza raha hahazo valisoa fanampiny. Raha toa ianao ka manana fiara mandehandeha eny an-dalana, nefa mila fiara iray, dia nafeninao ny maso ivoho fiara. Manolotra programa valisoa izy ireo, toy ny Hertz Gold Plus Rewards, mba hampitombo ny tsy fivadihana rehefa mandeha fiara ao anaty fiarany. Ary raha toa ka tsy zavatra ny fiara dia ny zavatra rehetra tokony hataonao dia manomboka amin'ny lamasinina. Amtrak sy ireo mpanazatra fiara hafa dia manolotra fandaharam-pivoarana ho an'ny mpandeha.
Ny fanalahidin'ny fandeferana (ary raha ny marina, ny tsy fivadihana amin'ity raharaha ity) dia manome valisoa tena sarobidy.
Ireo teboka sy kilaometatra nasongadina etsy ambony, toy ny kintan'i Starbucks, dia mifanakalozana ary azo alefa any amin'ny indostria. Amin'izany fomba izany, dia tsy misy ifandraisany amin'ny hevitra tsy misy dikany ianao. Afaka miara-miasa izy rehetra mba hahatongavanao any amin'izay laninao.
Safidio ny Airline be fitiavana sy Hotel Chain
Ahoana no fomba hivezivezin'izao tontolo izao amin'ny fampiasana Miles sy Points?
Nahoana ianao no tokony hanaparitaka ny fitiavana tsy mivadika?
Ahoana no fomba handaminana ny fiainanao tsy mivadika?
Mampiasà valisoa momba ny fitokisam-piarahamiasa momba ny fitateram-bahoaka ho an'ny Fianakaviana Manokana sy Fianakaviana
Inona no atao hoe Ryokan? Inona no hahaizana momba ny tranokala nentim-paharazana tany Japon
Aiza no hividianana Halloween Costumes any Brooklyn
Mpitsidika mahatsikaiky maro ho any Londres
Skiing and Snowboarding any Etazonia
Mandeha any Rosia amin'ny fahavaratra
Karazan-java-boahary nokleary: Tsara vintana amin'ny andronao
Ny fitsidihan'i Paris amin'ny lohataona: Ahoana no ahafahana manao izany?
Ampiasao ny SeatGuru.com mba hanatsarana ny traikefa an-dalamby Air Travel
Ahoana ny fomba hahatongavana any Londres, UK sy Paris ho Angers
Sakafo sy Toeram-pisakafoanana any Sacramento misokatra amin'ny Thanksgiving
Kickoff ny niainanao Amsterdam miaraka amin'ireo mpizaha tany Dam Square
The Cheapest Airport Transfers any Londra: EasyBus Review
San Diego amin'ny fahalavoana